Ikhaya | Jiabo
UJiabo ubhekene ngokukhethekile ekukhiqizeni ama-napkins enhlanzeko, amanabukeni ezingane nokunye kwemikhiqizo yenhlanzeko iminyaka eyi-18.
Ukunakekela Wena, Thanda Umhlaba!
Nikeza ngezinsizakalo ze-OEM neze-ODM zokukhiqizwa kwamanothi okuhlanzeka.
Foshan Jiabo sanitary imikhiqizo ubuchwepheshe Co., Ltd. ibhizinisi elikhulu elenza ucwaningo nentuthuko, ukukhiqiza, ukumaketha kanye nezinsizakalo ze-OEM / ODM zemikhiqizo yenhlanzeko yomuntu siqu, imikhiqizo yokunakekelwa yangasese yabesifazane njengama-napkin enhlanzeko, amanabukeni ezingane nesifihla-buso sokuvikela
I-Nankin Napkin pads ekhiqiza ukukhetha okuningi kweshidi elihle elingaphezulu
I-Sanitary Napkin Pads Cons, izinketho eziningi zemakethe yakho
Ama-pads okuya esikhathini, ama-sanin pads pads akhombisa
Okusha esitokweni design entsha ngokwezifiso mini izintokazi ezincane ezincane ukotini panty liner
Okusha esitokweni design entsha inkambiso encane yamantombazane amancane amancane ukotini we-panty liner
Isevisi ye-OEM / ODM
Umhlinzeki we-Careboss sanitary napkins unabasebenzi bezobuchwepheshe bokukhiqiza abasezingeni eliphakeme, ithimba le-OEM eliqeqeshiwe, elihlinzeka ngezinsizakalo zokuma okukodwa ze-OEM / ODM kusuka ekwakhiweni, ekukhiqizeni, ekugcinweni kwempahla nasekuhlelweni kwamakhasimende. "Ukwakha ukubambisana kokuwina nezingqondo zethu".
Amanabukeni ezingane ze-Careboss nefektri yenanitary napkins ibilokhu ihambisana nokusetshenziswa kwabahlinzeki bezinto zokuqala abaluhlaza, kusungula uhlelo oluqinile lokulawula ikhwalithi ukuqinisekisa imikhiqizo esezingeni eliphakeme. Le nkampani inamathela ebaluleke kakhulu emisha emisha nasekwenzeni izinto ezintsha kwezobuchwepheshe, futhi ithuthukisa "izindwangu zangasese ezivumeleke ngokuphelele nezingangeneki" zokuhlinzeka abathengi ngolwazi olusha lwezinto ezithambile, ezikahle neziphefumula kalula.
Ikhwalithi ephezulu yokuthengisa okushisayo kwe-aluminium foil emaphaketheni we-chip functional napkins napkins
1.Pads amahle ziyaphuma! 2.Sanitary pad floding 3. Izicucu ze-napkin zangasese ezinhle ziphambi kwakho!
I-HighQuality Case Wholesale-Foshan Jiabo Sanitary Products Technology Co, Ltd.
Jiabo ku-No 4th floor, Factory tatu, Tagang, Baishaqiao, Shishan Town, District Nan Nan, Foshan City.Guangdong Province.China Imikhiqizo ephakeme HighQuality Case Wholesale-Foshan Jiabo Sanitary Products Technology Co, Ltd. Lo mkhiqizo umelana nokugqwala. Iyamelana nokugqwala lapho kukhona amakhemikhali wezezimboni nawokuphanga futhi ayithinteki ukwehluleka kuleli cala.
Khipha ku-internet imibono yocingo ukupenda kwe-FactoryPrice-Jiabo
I-Foshan Jiabo imikhiqizo yezokuhlanzeka yemikhiqizo yezindlu Co, Ltd ikhethekile ekwenzeni imikhiqizo yezempilo nenhle yezempilo esezingeni eliphakeme yeminyaka engu-18, yonke imikhiqizo yenziwa ngamazinga we-ISO9001, SGS, CE njll.
Imikhiqizo eyaziwayo yemikhiqizo yokuhlanzeka yabesifazane insiza yokusebenza ngokubambisana, imfashini, iphephile futhi inempilo, sinakekela impilo yabesifazane besisebenza kanzima.
Abakhiqizi bemikhiqizo yenhlanzeko yabesifazane baseJiabo
& amaphrofayli abahlinzeki.
ICareboss inabasebenzi bezobuchwepheshe bokukhiqiza abasezingeni eliphakeme, ithimba le-OEM eliqeqeshiwe, elihlinzeka ngezinsizakalo zokuma okukodwa ze-OEM / ODM kusuka ekwakhiweni, ekukhiqizeni, ekugcinweni kwempahla nasekuhlelweni kwamakhasimende. "Ukwakha ukusebenzisana ngokuwina nezingqondo zethu" yifilosofi yethu yebhizinisi, "Ukunakekela umhlaba, thanda umhlaba" kuwumgomo wethu, futhi silwele ukuba ibhizinisi lokulinganisa embonini.
Uma uneziphakamiso zensizakalo yethu, sicela ugcwalise ifomu elingezansi. Sizophendula ngokushesha okukhulu.